Yiyiphi i-Black Hollywood Ethetha Ngama-Oscars
Imiba Abantu & Imicimbi
Ii-Oscar Snubs ziye zaba nzima kakhulu kwi-Hollywood Hollywood
Izabelo ze-Academy ngenye yezona zinto zihamba phambili ngobusuku bonyaka e-Hollywood, kodwa into esoloko isweleka: ukuhlukahluka. Abakhethiweyo bavame ukulawulwa ngabadlali abamhlophe nabalawuli kwaye oku akuzange kubonwe kwiindawo ezincinci.
Ngo-2016, abaninzi abantu base-Afrika baseMelika banqwenela ukunyusa umkhosi kwaye, ngenxa yoko, i-Academy yenza isifungo sokwenza utshintsho. Yintoni eyabangela le ntshukumo kunye nabadlali abamnyama bathetha ntoni ngaye?
Okubaluleke ngakumbi, ngaba kukho naziphi na izilungiso kwinkqubo yokuvota ukususela ngoko?
Ummeli uJada Pinkett Smith wabiza ukuba i-Oscars ye-2016 i-Oscars ngo-Januwari 16 kuba ngamnye ukhetho lwama-20 kumabakala abambela baya kubadlali abamhlophe . Kwaphawula ngomnyaka wesibini ngokulandelelana ukuba akukho mntu wemibala owamkela i-Oscar esebenzayo, kunye ne-hashtag #OscarsSoWhite ehamba phambili kwi-Twitter.
Abaxhasi babalingisi abanjengo-Idris Elba noMichael B. Jordan bazive becacile ukuba aba bantu abazange bahlonishwe ngemisebenzi yabo kwi "Beasts of No Nation" kunye ne "Creed," ngokulandelanayo. Abadlali beFilimu baphinde baxele ukuba abalawuli beefilimu-abesilisa abathandekayo bombala. Umlawuli wefilimu wangaphambili, uCary Fukunaga, unesiqingatha-saseJapane, ngelixa umlawuli wefilimu yokugqibela, uRyan Coogler, ngu-African American.
Njengoko wayebiza ukuba i-Oscars idibanise, u-Pinkett Smith wathi, "KwiAscars ... abantu bemibala bahlala bemkelwa ukuba banike iimbasa ... nokuba bajabule.
Kodwa asiqhathaniswa siqwalasela ukufezekiswa kwethu kwezobugcisa. Ukuba abantu abanemibala abafuni ukuthatha inxaxheba ngokupheleleyo? "
Wayengeyena kuphela umdlali we-Afrika waseMerika ukuvakalelwa ngale ndlela. Abanye abathambileyo, kuquka umyeni wakhe, uWill Smith, bajoyine naye. Abanye baphinde bachaze ukuba iicandelo lefilimu ngokubanzi lifuna ukugqithiswa kweentlobo.
Nantsi into ebomnyama yaseHollywood ekufuneka iyenze malunga neengxaki ze-Oscars.
I-Oscars Ayinayo ingxaki
UViola Davis akazange abe ngumnye wokubambezela xa exoxa ngemiba yentlalo efana nohlanga, iklasi, kunye nesini. Wathetha ngokungahambi kwamathuba abenzi bombala xa edala imbali ngo-2015 ngokuba ngumntu wokuqala wase-Afrika ukuba anqobe uEmmy njengomdlali weqonga elifanelekileyo kwiidrama.
Ebuzwa malunga nokungabikho kweentlobo ezahlukeneyo phakathi kwabakhethiweyo be-Oscar ngo-2016, uDavis wathi le mbambano yadlulela ngaphaya kwama-Award Academy.
"Ingxaki ayikho kwi-Oscars, ingxaki yenkqubo ye-Hollywood yokwenza ifilimu," kusho uDavis. "Zingaphi iifomnyama ezimnyama eziveliswa minyaka yonke? Bahanjiswa njani? Iifilimi ezenziwa-ngaba ngabavelisi bexesha elide bacinga ngaphandle kwebhokisi malunga nendlela yokwenza indima? Ngaba unako ukubeka umfazi omnyama kuloo nxaxheba? Ngaba unokwenza umntu omnyama kuloo nxaxheba? ... Unokutshintsha i-Academy, kodwa ukuba akukho zifilimu ezimnyama eziveliswayo, yintoni eyokuvota? "
I-Boycott IiFomesi ezingabonakali
Ngokufana noDavis, u-Whoopi Goldberg uthe i-2016 abamhlophe abamhlophe abatyunjwa ngokubamba iqela lefilimu kune-Academy.
"Umba awukho i-Academy," utshilo i-Goldberg kwi-ABC "I-View," eyabambisana ngayo. "Nangona uzalisa i-Academy ngamalungu amnyama nabaseLatin kunye nabase-Asia, ukuba akukho bani kwisikrini sokuvota, awuyi kufumana umphumo owufunayo."
UGoldberg, owawuthatha u-Oscar ngo-1991, wathi ukuba abadlali bombala bafumane imisebenzi evelele kwiifilimu, abalawuli kunye nabavelisi kufuneka babe yizinto ezahlukahlukeneyo. Kumele baqaphele ukuba iifilimu ezingekho namalungu aphulukileyo ombala alahlekelwa uphawu.
"Ufuna ukunqumla into?" Wabuza ababukeli. "Musa ukuhamba ubone ama-movie angenalo ukumela kwakho. Yiloo nto oyifunayo. "
UWill Smith uyavuma ukuba into awazange ayifumane ukutyunjwa kwendima yakhe "kwiNgxubusho" inokuba negalelo kwisigqibo sakhe somfazi sokunyathela ama-Oscars. Kodwa umdlali wecandelo elikhethiweyo kabini wagxininisa ukuba le nto yayingekho nje kuphela isizathu sokuba u-Pinkett Smith wakhetha ukukhwaza.
"Ukuba ndikhe ndatyunjwe kwaye akukho bantwini bombala bekunjalo, bekungayenza le vidiyo," utshele i-ABC News. "Siya kuhlala silapha nale ngxoxo.
Oku akunzulu kakhulu kum. Yiyo malunga nabantwana abaya kuhlala phantsi kwaye baya kuwubukela lo mboniso kwaye abayi kubona bebamele. "
U-Smith uthe uvakalelwa kukuba i-Oscars ihamba "kwindlela engafanelekanga," njengoko i-Academy imhlophe kakhulu kunye nendoda kwaye, ngoko, ayibonisi ilizwe.
"Senza amafilimu, akusiyo into ebalulekileyo, ngaphandle kokuba ityala imbewu ngamaphupha," kusho uSmith. "Kukho ukuphazamiseka okubuhlungu kwilizwe lethu nakwimveliso yethu engayifuni nxalenye kuyo. ... Mamela, sidinga isihlalo kwigumbi; asikho isihlalo kwigumbi, kwaye yinto ebaluleke kakhulu. "
Kwakhona kunomdla ukuqaphela ukuba uSmith ufumene abakhethiweyo be-Oscar kumsebenzi wakhe. Elinye lalingu-"Ali" (2001) kunye nelinye elithi "Ukuphandelelwa Kwentlalo" (2006). UWill Smith akakakaze anqobe i-Oscar.
I-Academy ayiyiyo imfazwe eyiyo
I-Filmmaker kunye nomdlali we-Spike Lee wamemezela nge-Instagram ukuba uya kuhlala ngaphandle kwe-Oscars, naphezu kokuphumelela u-Oscar ohloniphekileyo ngo-2015. "Kwenzeka njani ukuba unyaka wesibini olandelelanayo bonke abadlali abangama-20 phantsi komdlalo wecala? Kwaye masingangeni nakwamanye amasebe. Abadlali abangama-40 abamhlophe kwaye akukho nxalenye ye-flava. Asikwazi ukwenza ?! WTF !! "
U-Lee wabe esecacisa amagama e-Rev. Martin Luther King Jr: "Kuza ixesha apho umntu kufuneka athathe indawo engaphephekanga, engekho kwezopolitiko, okanye ethandwa, kodwa kufuneka ayithathe ngenxa yokuba unembeza umxelela ukuba kulungile."
Kodwa njengoDisis noGoldberg, uLee wathi i-Oscars ayingeyona imvelaphi yemfazwe yangempela.
Le nqhawe "kwiofisi elawulayo ye-Hollywood studios kunye neTV kunye namanethiwekhi," watsho. "Yilapho abalindisango banquma ukuba yintoni eyenziwa kwaye yintoni eyenziwa ukuba 'iguqulwe' okanye ityapu. Abantu, inyaniso thina asikho kulawo macumbi kwaye de kube ngabancinci, abakhethiweyo be-Oscar baya kuhlala bengamabala amhlophe. "
UChris Rock, umkhosi wama-Oscars ka-2016, wanika impendulo kodwa impendulo ngokuchasene ngokungafani. Emva kokunyulwa kwamagama, iDwala ithathe kwi-Twitter ithi, "I-#Oscars. I-White BET Awards. "
Emva kokuhlaselwa ngo-2016, i-Academy yenze utshintsho kwaye abakhethiweyo be-Oscar ba-2017 babandakanye abantu bemibala. Baye bathatha amanyathelo okongeza ulwahlulo kwiBhodi yabaGunya kwaye bafungele ukubandakanya abafazi abaninzi kunye nabancinci phakathi kwamalungu ayo okuvota 2020.
"Ukukhanya kwelanga," kunye ne-African American cast cast home home of the best picture in 2017 kunye nomlingisi uMahershala Ali unqobe umdlali oncedisayo. Kwakhona wayengumdlali wokuqala wamaSilamsi ukunqoba i-Oscar. UVuola Davis wathatha umdlalo wecala lokuxhasa inxaxheba yakhe kwi "Iingcingo" kunye noTroy Maxson wakhethwa kwinxaxheba ephambili kwi-movie efanayo.
Ngama-Oscars ka-2018, iindaba eziphambili kukuba iJordan Peele yamkela umphathi ogqwesileyo kunyulo othi "Phuma." Nguye kuphela wesihlanu we-African-American kwi-Academy yomlando ukufumana le mbeko.
Ngokubanzi, kubonakala ngathi i-Academy yakuva ilizwi elinomdla kwaye lenze amanyathelo ekuqhubela phambili. Ukuba ngaba okanye asiyi kubona enye i-#OscarsSoWhite umendo, ixesha elilodwa liza kuxela.
Kukho intetho yokwandisa ukuhlukahluka ngaphaya kwe-Afrika yaseMerika kwaye ithemba ukuba ezinye iiLatinos, amaSulumane kunye nabalingisi bezinye iindawo ezincinci zingamelwa kakuhle.
Njengoko iinkwenkwezi ziqaphele, iHollywood idinga ukutshintsha kwakhona. Ukukhutshwa kuka-2018 ka "Black Panther" kunye ne-Afrika yaseMelika yaseMelika, yayingumngcwabo. Abantu abaninzi baye bathetha ukuba ngaphezu kwe-movie, yintambo.
Unokunyamekela njani iivili zakho zemibala